အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kyaw Zay Ya - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kyaw Zay Ya
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Kyaw Zay Ya ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၁၂:၅၉၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)
Thank you for adding photos to articles. But your uploaded photos are probably taken from various sources and claimed as your own work. This is not acceptable on Wikipedia. Please do not upload files taken from somewhere. And you're also requested not to use Zawgyi font in Myanmar Wikipedia. Thanks. Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၂၉၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
လှေခွင်းတောင် အား မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် အဆိုပြုထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
လှေခွင်းတောင် စာမျက်နှာအား ဝီကီပီးဒီးယားမှ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် အဆိုပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက် အပိုင်း G12 အရ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆောင်းပါးသို့မဟုတ် ပုံသည် မူပိုင်ခွင့်ကို ထင်ရှားပြတ်သားစွာ ချိုးဖောက်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး သို့မဟုတ် ပုံသည် http://wailinhtet337.blogspot.com/2014/09/blog-post_5.html မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းပြချက်များအရ အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများမှ ရယူထားသော မူပိုင်ခွင့်ရှိသော စာသားများနှင့် ပုံများအား ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် သင်၏ ထည့်သွင်းရေးသားထားမှုများသည်လည်း ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။ ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံနှိပ်မီဒီယာများမှ အချက်အလက်များအား ရင်းမြစ်အဖြစ် ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ဝါကျများ အား ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးမပြုရပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ သင့်ကိုယ်ပိုင် စကားလုံးများဖြင့် ပြောဆိုပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်မှုများအား အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပြီး မကြာခဏ ဖောက်ဖျက်သူများသည် တည်းဖြတ်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ဤစာမျက်နှာသည် ဤအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဖျက်ရန် မသင့်ဟု ယူဆပါက၊ စာမျက်နှာသို့ သွားရောက်ကာ "ဤမဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်"ကို နှိပ်ပြီး အဆိုပြုခြင်းကို ကန့်ကွက်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ရှင်းပြနိုင်မည့် အခွင့်အရေး ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း စာမျက်နှာတစ်ခုသည် မဆိုင်းမတွ ဖျက်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ခံရပြီးပါက စာမျက်နှာကို ချက်ခြင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဆိုင်းမတွ ဖျက်ရန် သတိပေးချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် မဖယ်ရှားပါနှင့်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၀၈၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Kyaw_Zay_Ya&oldid=438942" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။